ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဆူဇူကီးကားများ | ဆူဇူကီးကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Filter အားလုံး ရှင်းလင်းပါ
Grand Starex (33)
GRX Starex (70)
Starex GRX (2)
Bongo III (1)
Bongo III Coach (3)
LX 570 (7)
Morris Garages (7)
AD VAN (134)
Land Cruiser (78)
Mark II (332)
Mark X (61)
Audi BMW Chevrolet Daihatsu Dodge Ferrari Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Jaguar Jeep Kia Land Rover Lexus Lincoln Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Morris Garages Nissan Peugeot Porsche Renault Scion Subaru Suzuki Toyota Volkswagen
Off-Road Vehicle / Suv (1)
Root Category (2)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1988 201
A/C: Front (1)
A/C: Rear (1)
Cassette Radio (1)
ရက်စွဲပြင်ရန် - အနီးဆုံးမှစ ရက်စွဲပြင်ရန် - အဟောင်းဆုံးမှစ ဈေးနှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ ဈေးနှုန်း - အမြင့်ဆုံးမှစ မိုင်နှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ မိုင်နှုန်း - အမြန်ဆုံးမှစ သီးသန့် အကြံဥာဏ်ပေးထားသော
ရက်စွဲပြင်ရန် - အနီးဆုံးမှစ
ရက်စွဲပြင်ရန် - အဟောင်းဆုံးမှစ
ဈေးနှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ
ဈေးနှုန်း - အမြင့်ဆုံးမှစ
မိုင်နှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ
မိုင်နှုန်း - အမြန်ဆုံးမှစ
: သီးသန့် အကြံဥာဏ်ပေးထားသော
ထို ရှာဖွေမှုကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
နေ့စဉ် ကျွန်တော်တို့သည် ကားအသစ် စာရင်းများကို ထည့်သွင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ဌင်းတို့ကို ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်‌ခေါက် သင့်က ဈေး‌ကောင်းကမ်းလှမ်းချက် တစ်ခုကို ရရှိလိုပါသလဲ ?
အချိန်တိုင်း နောက်ခံဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Lks 262 ညှိနှိုင်း
Pearl white Suzuki Ciaz 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start.ေ...
email ပို့ရန် ဖုန်းခေါ်ရန် ပြသသည် အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ
Suzuki Stingray 2008
Lks 75 ညှိနှိုင်း
Black Suzuki Stingray 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver...
မြန်မာပြည်တွင်းကား‌ဈေးကွက်မှ ဆူဇူကီး ကားများ။ ။
ဆူဇူကီးကားများရဲ့ တွင်ကျယ်မှုဟာလည်း ပြည်တွင်းမှာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လျှင်ရှိပါတယ်။အဓိက အားဖြင့် ဆူဇူကီးကားတွေဟာ ကားအသေးစားလေးတွေ ဖြစ်တာမို့ ပြည်တွင်းမှာလည်း ကားအသေးစားလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီး ကယ်ရီ ထရပ်လေးတွေ အပြင် အခြား ၁၃၀ဝ စီစီကားလေးတွေထဲက ဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီး ဆွစ်နဲ့ ဆူဇူကီး အဲလ်တို စတဲ့ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစား လုပ်ငန်းလေးတွေ အတွက် ဆူဇူကီး ကားတွေဟာ အခြားသော ဘရန်က ထရပ်လေးတွေနဲ့စာလျှင် နာမည်ရနေတဲ့ ကားဘရန်ထဲက ကားများပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူဇူကီး အမှတ်တံဆိပ်ဟာ မြန်မာပြည် ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဂျပန်ပြည်ထုတ် ကားတွေထဲမှာ အစောဆုံး စာရင်းထဲမှာ ပါဝင် ပါတယ်။ ဂျပန် လေလံ ကားတွေ တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် မပြုခင် ကတည်းက ဆူဇူကီးဟာ မြန်မာပြည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များကို အဓိကထား ရောင်းချခဲ့ ပါတယ်။ အသစ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကား ဈေးကွက် ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဆူဇူကီး အမှတ် တံဆိပ်ထဲ ကနေ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ အပြင် အိမ်စီး ကား အမျိုးမျိုး ကိုပါ ဝယ်ယူ အသုံးပြုလာကြ ပါတယ်။
ဆူဇူကီး စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ နည်းပညာ
ထိုခေါင်းစဉ်အတွက် ပြည်တွင်းက အိမ်စီးကားမှာ အသုံးများနေတဲ့ ဆူဇူကီး ဆွစ်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်စားတဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၃၀ဝ စီစီ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂၀ဝ စီစီမော်ဒယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ စူပါ မီနီကားတွေထဲမှာ တစ်ခုတည်းသော လေးဘီးမောင်း စနစ်ကို ရရှိနိုင်တဲ့ ဆူဇူကီး ဆွဇ်များဖြစ်ပြီး ၁၂၀ဝ စီစီ အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေ အား ၉၃ ရှိပြီး ၁၂ စက္ကန့်ကျော်ဖြင့် သုညမိုင်ကနေ ၆၂ မိုင်ကို မြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအင်ဂျင်ဟာ ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ဆီ (၁) ဂါလံကို ၅၆ မိုင်ကျော်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကား မော်ဒယ်များ အနေနဲ့ ဌွ ဂရိတ်၊ျွှ ဂရိတ်၊ ဌူ ဂရိတ် ကား အမျိုးအစားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌူ ဂရိတ်ကတော့ အနည်းငယ် မော်ဒယ် မြင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဈေးကလည်း အနည်းငယ် မြောက်တက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကားစီယာတိုင်မှာ ခလုတ်တွေ ပါဝင်လာတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီ ကတော့ တော်တ်ာများများသောမော်ဒယ်တွေမှာ ပါရှိပါတယ်။ မပါရင် ဒီရောက်မှာ ပြန် လည်း တပ်ဆင်ခြင်းတွေလည်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ဆူဇူကီးရဲ့ မော်ဒယ်ကားများ
အိမ်စီး ဆူဇူကီး ထဲမှာ ယနေ့ လူကြိုက် အများဆုံးနဲ့ အသွင်း အများဆုံးက ဆူဇူကီး ဆွစ် ဖြစ်ပါတ်။ ဆွစ် လို့ အမည်ပေး ထားတဲ့ နောက်ဖုံးဖွင့် ကားငယ်က ပြိုင်ဘက် တိုယိုတာ ဗစ် နဲ့ ဟွန်ဒါ ဖစ် တို့ထက် အရည်အသွေး အားဖြင့် ပိုမို ကောင်းမွန်ကြောင်း ယုံကြည် လက်ခံထားကြ ပါတယ်။ ဈေးလည်း ပိုကြီး ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၁၃၀ဝ စီစီ ဝန်းကျင် အပြင် ၂၀ဝ၀ စီစီ ဝန်းကျင်တွေလည်း ရနိုင် ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အများစု ကတော့ အင်ဂျင် သေးတာပဲ မှာကြ ပါတယ်။
ဆူဇူကီး အဲတို ကားလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဖ်က ခရီးဝေးသွားမယ့်ကား မဟုတ်ပဲ မြို့တွင်း မှာပဲ အသုံးများ အစီးများတဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကဆီ အဖြစ် ပြုလုပ်တာလည်း နည်းပါတယ်။ ခရီးသည် လေးဦး ဆံ့ပြီး ကာဂိုတင်မယ့် အခန်းကျယ် လည်း နောက်မှာ ပါဝင် ပါတယ်။ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ပုလဲရောင်၊ အနီရောင် အစရှိသဖြင့် အရောင်စုံ တင်သွင်းကြ ပါတယ်။ ဈေး ကလည်း သိန်း ၁၆၀ ဝန်းကျင် ဆိုရင် သေချာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဆူဇူကီး ဆွစ်ဖ်ကို ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဖ် အပြင် ဆူဇူကီး နောက်ဖုံး ကားများလည်း ဈေးသက်သာပါသေးတယ်။ သူ့ကိုတော့ အများစုက တက္ကဆီ အဖြစ် အသုံးပြုကြ ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ်က ၁၃၀ဝ စီစီ ဝန်းကျင် မှာပဲ ရှိပါတယ်။ သူက ဆွစ်ဖ် ထက်လည်း အရွယ် ပိုကြီး ပါတယ်။ ဆူဇူကီးမှာ အဝယ်များတာ နောက်တစ်မျိုးက လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ရီ လို့ အလွယ်ခေါ် ကြပြီး အင်ဂျင် အရွယ် တစ်ထောင်အောက်က လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကလည်း သိန်း ၆၀၊ ၇၀ ဝန်းကျင် မှာပဲ ရှိပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာပဲ အသေးစား လုပ်ငန်းများ၊ ဆိုင်များ၊ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ အသုံးပြု နေကြတာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူဇူကီး ကနေ အဟောင်းတွေ အများစု ဝင်ပါတယ်။ အသစ်တွေလည်း ဝင်ပါတယ်။ ဆူဇူကီး အသစ်များ ရောင်းဖို့ အတွက်လည်း ဆူဇူကီးဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာပဲ ဂျပန် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်လည် ဆင်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ စက်မှု ဇုန် ဆူဇူကီး ကယ်၇ီ ညာမောင်းတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းကိုတော့ အသစ်အနေဖြင့် ဈေးသက်သာစွာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူဇူကီး ပြည်တွင်းမှာ ရရှိနိုင်မှုများ
ဆူဇူကီး ဘရန်ကားတွေကို ပြည်တွင်းမှ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူဇူကီး ကယ်ရီ ထရပ်လေးတွေကို ပြည်ပကနေ တစ်ပတ်ရစ်ထဲက မှာယူနိုင်သကဲ့သို့ ပြည်တွင်းမှာ ဂျပန်ပစ္စည်းနဲ့ စက်မှု ဇုန်မှာ တပ်ဆင်တဲ့ကားတွေကို လည်း အသစ် ကားတွေ အဖြစ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော ကားတွေ အတွက်ကတော့ စိတ်ချရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ အင်ဂျင်တွေက အခုမှ အသစ်တွေ ဖြစ်တာရယ်၊ မောင်းနှင်မှုနှုန်းမှာ အဆင်ပြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူဇူကီးရဲ့ အိမ်စီးကားတွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာ သိပ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘဲ တွေ့ရတဲ့ ဆူဇူကီး ဆွစ်တွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အဝယ်အနည်းငယ်အေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆူဇူကီး ဘရန်ရဲ့ ထူးခြားမှု
ဆူဇူကီး ဘရန်ထဲမှာ သေးငယ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဆူဇူကီး အဲလ်တိုကားလေးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ မီနီ ဆိုဒ်ကား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီက ထုတ်တဲ့ အဲလ်တိုကားများကို ဈေးနှုန်း သက်သာခြင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ သေးငယ်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ အသုံးပြုသူ အနည်းစု ရှိနေပါတယ်။ တံခါး ( ၅) ပေါက် ကားလေးများ ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား သေးငယ်လို့ လမ်းပိတ်ဆို့မူတွေမှာ အဆင်ပြေလို့ သုံးကြတဲ့ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးလည်း ဆူဇူကီး ကယ်ရီ လေးတွေ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဆူဇူကီး အဲလ်တိုကို ပြည်တွင်းမှာ ပုံစံ နှစ်မျိုးတွေ နိင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ၂၀ဝ၄ ကနေ ၂၀ဝ၉ ကို ထုတ်တဲ့ ရှေ့ဖက် လေးထောင့်ကျတဲ့ ကား ပုံစံနဲ့ပါ။ သူရဲ့ အနောက်မှာ လာတဲ့ ကား အမျိုးအစားကတော့ ရှေ့ဖက် အနည်းငယ် လုံးဝန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ မီးလုံတွေ ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှေ့ ခေါင်းနဲ့ မီးလုံး ပုံစံက နည်းနည်း ရှည်မျောမျောနဲ့ လုံးဝတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဆူဇူကီ အဲယ်တိုလေးတွေဟာ သေးငယ်တဲ့ ကားအသေးစားလေးတွေ ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ အင်ဂျင်ပါဝါကလည်း သိပ်မကြီးလှပါဘူး။ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လောင်စာဆီ စားနှုန်း သက်သာတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလင်ဒါ သုံးလုံး ၁၀ဝ၀ စီစီ နီးပါးရှိတဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ ပြေးနေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်းထက် လောင်စာဆီစားနှုန်း သက်သာမှုကို အားပေးထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ စက္ကန့်နီးပါးအတွင်း သုညမိုင်ကနေ တစ်နာရီ ကို ၆၂ မိုင် ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ မြန်တယ်လို့တော့ ဆိုလို့မရပါဘူး။ မန်နျူးဂီယာဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကီး အဲယ်တိုတွေမှာတော့ ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလံကို ၆၅ မိုင်၊ ၆၆ မိုင်လောက် ရရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ လေးချက်တွေကတော့ တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်ပြေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် ဆူဇူကီး ဘရန်လေးတွေဟာ ချစ်စရာ ပုံစံရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကိုယ်ထည်လေးတွေနဲ့အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေလှတဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Suzuki မော်ဒယ်
Suzuki Chevrolet MW
Honda Motorcycles Click
Honda Motorcycles Scoopy i
Honda Motorcycles MSX
Andbo CZI 3
Google Play ပေါ်တွင် ရယူပါ
App Store တွင် ရယူပါ
© 2018 by Carmudi Myanmar Limited